Sawirro laga helay magaalada Palmyra - BBC News Somali
Sawirro laga helay magaalada Palmyra
Image caption dhibaatadu sidii la filayay way ka yartahay
Sawirro cusub ayaa ka soo muuqday magaalada qadiimiga ah ee Palmyra, saacado uun kaddib markii ciidammada Suuriya ay dib uga qabsadeen kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka.
Sawiradda ayaa muujinaya baaxadda ay la egtahay burburka ay kooxdaasi u gaysteen tobankii bilood ee ay haysteen goobtaasi oo ay hay’adda Unesco u aqoonsatay dhaxal iyo hiddo ay aadanuhu leeyihiin oo heer caalam ah.
Inkasta oo la burburiyay waxyaabo qadiimi ah haddana waxaa la sheegay in ay taaganyihiin dhismayaashii qadiimiga ahaa ee magaaladaasi ka soo haray. Madaxa waxyaabaha qadiimiga ah ee dalka Suuriya, Maamuun Cabdulkarim ayaa sheegay in ay filayeen in dhibaatada ugu xun la gaarsiindoono dhismahaasi, balse wuxuu wakaaladda wararka ee AFP, u sheegay in inta badan ay taaganyihiin haraagii magaaladaasi qadiimiga ah.
Image caption Sawir laga qaaday qaybta casriga ah ee magaalada
Image caption Masrixii ay u adeegsan jireen in ay dadka ku dilan ayaa wali sidiisii u dhisan.
Image caption Waxyaabo qadiimi ah oo iyaga oo burbursan dhex daadsan matxafka
Image caption Dhismaha dawladda hoose ee Palmyra oo aad u burbursan
Wuxuu qorshaynayaa booqashada magaaladaasi qadiimiga ah si uu u qiimeeyo.
Madaxwaynaha dalka Suuriya Bashar Al-Asad ayaa aad u bogaadiyay dib u qabsashada Palmyra, wuxuuna ku tilmaamay guul wayn oo laga soo hoyiyay dagaalka lagula jiro argagixisada.
Warar laga helayo millitarigu waxay sheegayaan in ciidammada Suuriya ay gacanta ku hayaan magaalada oo dhan, kaddib maalmo ay dagaal wadeen iyaga oo gacan ka helaya diyaaradaha dagaalka ee Ruushka.
Image caption Haraaga dhisme qadiimi ah 2000 oo sano ku dhawaad jiray, kooxda Dawladda Islaamka ayaa burburisay bishii 10 ee sanadkii 2015-kii
Image caption Hay'adda Unesco ayaa magaaladaasi ku tilmaantay mid ka mid ah taariikhiihii ugu muhiimsanaa ee ka haray dadkii hore
Afhayeen u hadlay aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin ayaa sheegay in madaxwayne Putin uu u hambalyeeyay Bashaar AL-Asad. Aqalka Kremlin-ku wuxuu sheegay in madaxwayne Asad uu ogyahay in uusan qabsoomeen hawlgalka Palmyra lagu qabtay haddii uusan gacan ka helin Ruushka.